Mateu 25 | Bhaibheri repaIndaneti | Shanduro Yenyika Itsva
25 “Zvino umambo hwokumatenga huchava hwakafanana nemhandara gumi dzakatora marambi adzo+ dzikabuda kunochingura muroori.+ 2 Shanu dzacho dzakanga dzakapusa,+ asi shanu dzakanga dzakangwara.+ 3 Nokuti dzakapusa dzakatora marambi adzo dzikasatora mafuta, 4 asi dzakangwara dzakatora mafuta mumidziyo yadzo nemarambi adzo. 5 Muroori paakanga achinonoka, dzose dzakatsimwaira dzikarara.+ 6 Pakati pousiku chaipo kushevedzera kwakanzwika,+ zvichinzi, ‘Heuno muroori! Budai muzomuchingura.’ 7 Mhandara dzose idzodzo dzakabva dzamuka, dzikagadzirira marambi+ adzo. 8 Dzakapusa dzakati kune dzakangwara, ‘Tipeiwo mamwe mafuta enyu,+ nokuti marambi edu ava kuda kudzima.’ 9 Dzakangwara+ dzakapindura nemashoko okuti, ‘Zvichida pangasava neanonyatsotikwanira isu nemi. Asi, endai kune vanoatengesa muzvitengere.’ 10 Pavakanga vachienda kunotenga, muroori akasvika, uye mhandara dzakanga dzakagadzirira dzakapinda naye mumutambo womuchato;+ uye suo rakavharwa. 11 Pashure paizvozvo dzimwe mhandara dzose dzakauyawo, dzichiti, ‘Changamire, changamire, tivhurireiwo!’+ 12 Achipindura, iye akati, ‘Ndinokuudzai chokwadi, handikuzivii.’+ 13 “Naizvozvo, rambai makarinda+ nokuti hamuzivi zuva racho kana awa yacho.+ 14 “Nokuti zvakafanana nezvakaitika mumwe murume+ paakanga ava kuda kuenda kunze kwenyika,+ akashevedza varanda vake, akavaronzesa zvinhu zvake.+ 15 Akapa mumwe matarenda mashanu, mumwe maviri, mumwezve rimwe chete, mumwe nomumwe maererano nezvaaikwanisa,+ akaenda kunze kwenyika. 16 Uya akagamuchira matarenda mashanu akabva angoenda, akaita bhizimisi nawo, akawana mamwe mashanu.+ 17 Saizvozvowo uya akagamuchira maviri akawana mamwe maviri. 18 Asi uya akagamuchira rimwe chete akaenda, akachera muvhu, akavanza mari yesirivha yatenzi wake. 19 “Pashure penguva refu,+ tenzi wevaranda ivavo akauya, akagadzirisa zvemari dzake navo.+ 20 Naizvozvo uya akanga agamuchira matarenda mashanu akauya, akaunza mamwe matarenda mashanu, achiti, ‘Tenzi, makandironzesa matarenda mashanu; onai, ndakawana mamwe matarenda mashanu.’+ 21 Tenzi wake akati kwaari, ‘Waita zvakanaka, muranda akanaka uye akatendeka!+ Wakanga wakatendeka+ pazvinhu zvishoma. Ndichakugadza kuti utarisire zvinhu zvizhinji.+ Fara+ pamwe chete natenzi wako.’ 22 Zvino uya akanga agamuchira matarenda maviri akauya, akati, ‘Tenzi, makandironzesa matarenda maviri; onai, ndakawana mamwe matarenda maviri.’+ 23 Tenzi wake akati kwaari, ‘Waita zvakanaka, muranda akanaka uye akatendeka! Wakanga wakatendeka pazvinhu zvishoma. Ndichakugadza kuti utarisire zvinhu zvizhinji.+ Fara+ pamwe chete natenzi wako.’ 24 “Pakupedzisira, uya akanga agamuchira tarenda rimwe chete akauya,+ akati, ‘Tenzi, ndaiziva kuti muri munhu akaoma, munokohwa pamusina kudyara uye munounganidza pamusina kuurutsa. 25 Naizvozvo ndakatya,+ ndikaenda, ndikanovanza tarenda renyu muvhu. Hezvi zvinhu zvenyu.’ 26 Achipindura, tenzi wake akati kwaari, ‘Muranda akaipa uye ane usimbe, handiti waizviziva hako kuti ndinokohwa pandisina kudyara uye ndinounganidza pandisina kuurutsa? 27 Saka, waifanira kudai wakaisa mari yangu yesirivha kune vokubhengi, uye pakusvika kwangu ndingadai ndiri kugamuchira mari yangu yabereka.+ 28 “‘Naizvozvo mutorerei tarenda racho muripe uya ane matarenda gumi.+ 29 Nokuti munhu wose anazvo, achawedzerwa zvimwe uye achava nezvizhinji; asi uya asina, kunyange nezvaainazvo achazvitorerwa.+ 30 Kandai muranda pasina murima riri kunze. Ikoko ndiko kwaachasvimha misodzi ari nokugeda-geda mazino ake.’+ 31 “Mwanakomana womunhu+ paanosvika achibwinya, aine ngirozi dzose,+ achabva agara pachigaro chake choumambo chinobwinya.+ 32 Zvino marudzi ose achaunganidzwa pamberi pake,+ uye achaparadzanisa+ vanhu mumwe achibva kune mumwe,+ sokuparadzanisa kunoita mufudzi makwai nembudzi. 33 Zvino achaisa makwai kuruoko rwake rworudyi,+ asi mbudzi kuruboshwe rwake.+ 34 “Mambo achabva ati kune vaya vari kurudyi rwake, ‘Uyai, imi makakomborerwa naBaba vangu,+ garai nhaka+ youmambo+ hwamakagadzirirwa kubvira pakuvambwa kwenyika.+ 35 Nokuti ndakava nenzara mukandipa chokudya;+ ndakava nenyota mukandipa chokunwa. Ndakanga ndiri mueni mukandigamuchira zvakanaka;+ 36 ndisina kupfeka,+ mukandipfekedza. Ndakarwara mukanditarisira. Ndakanga ndiri mujeri+ mukauya kwandiri.’ 37 Vanhu vakarurama vachabva vamupindura nemashoko okuti, ‘Ishe, takakuonai rini muine nzara tikakupai zvokudya, kana muine nyota,+ tikakupai chokunwa?+ 38 Takakuonai rini muri mueni tikakugamuchirai zvakanaka, kana musina kupfeka, tikakupfekedzai? 39 Takakuonai rini muchirwara kana muri mujeri tikauya kwamuri?’ 40 Zvino achipindura, mambo+ achati kwavari, ‘Chokwadi ndinoti kwamuri, Kana makazviitira mumwe wevaduku+ vehama dzangu idzi,+ makazviitira ini.’+ 41 “Iye achabva atiwo kune vaya vari kuruboshwe rwake, ‘Ibvai kwandiri,+ imi makatukwa, muende mumoto usingaperi+ wakagadzirirwa Dhiyabhorosi nengirozi dzake.+ 42 Nokuti ndakava nenzara, asi hamuna kundipa chokudya,+ uye ndakava nenyota,+ asi hamuna kundipa chokunwa. 43 Ndakanga ndiri mueni, asi hamuna kundigamuchira zvakanaka; ndisina kupfeka, asi hamuna kundipfekedza;+ ndichirwara uye ndiri mujeri,+ asi hamuna kunditarisira.’ 44 Ivowo vachabva vapindura nemashoko okuti, ‘Ishe, takakuonai rini muine nzara kana muine nyota kana muri mueni kana musina kupfeka kana muchirwara kana muri mujeri tikasakushumirai?’ 45 Iye achabva avapindura nemashoko okuti, ‘Chokwadi ndinoti kwamuri, Kana musina kuzviitira mumwe wevaduku ava,+ hamuna kuzviitira+ ini.’+ 46 Zvino ava vachaenda mukugurwa kusingaperi,+ asi vakarurama muupenyu husingaperi.”+